Inspiration4 - SpaceX : Tafaverina eto an-tany ireo mpitsangatsangana anabakabaka
dimanche, 19 septembre 2021 19:48
Niainga tao Centre spatial Kennedy, Floride ireto mpitsangatsangana anabakabaka 4 mianadahy, roa lahy, roa vavy ny alarobia 15 septambra 2021, rehefa natosiky ny sambondanitra Falcon 9, hiazo ny 600km miala amin'ny tany, ambonin'ny station spatiale internationale eo amin'ny 400km, izay misy olona mipetraka.
Tafaverina tety an-tany, afaka 3 andro, tao amin'ny ranomasin'i Floride izy ireo ny sabotsy 18 septambra 2021.
Niavaka ity sidina teny anabakabaka ity, satria tsy nisy mpanamory matihanina voahofana mandritra ny taona maro, fa nisy mpanakarena iray, Jared Isaacman, no niantoka ny saran-dalan'ny olona 3 tsy fantany akory, dia :
- Hayley Arceneaux, vehivavy mpiasan'ny fahasalamana, 29 taona, Amerikanina tanora indrindra amin'ireo efa niakatra teny amin'ny habakabaka ;
- Sian Proctor, vehivavy mpampianatra 51 taona ;
- Chris Sembroski, miaramila teo aloha tao amin'ny tafika anabakabaka, 42 taona.
Enim-bolana ihany no nanaovan'izy ireo fanazaran-tena, izay nifantoka indrindra amin'ny fombafomba fiainana eny ambony eny.
50 000 000$ ny sarandalan'olona iray, ka dia naloan'i miliaridera Jared Isaacman avokoa izany ny 200 000 000$.
Misokatra ankehitriny hoy Elon Musk, tompon'ny SpaceX, ny lalana mikodana mankeny amin'ny habakabaka, izay andraisana ireo mpitsangatsangana, miaraka amin'ny sambondanitra mahazaka tena, ary voafehy miainga ety an-tany.
Niodina in-15 isan'andro manodidina ny tany ity sambondanitra ity, amin'ny hafainganam-pandeha 28 000km/ora, eny amin'ny 575km ambonin'ny tany.
Efa manomana ny hiainga amin'ny volana janoary 2022 sahady ny orinasa SpaceX, hiaraka amin'ny mpandraharaha 3 hafa hitsangatsangana eny ambony eny.